Badbaadinta Dadka oo dhan, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Sanado badan kahor, waxaan maqlayay fariin markii ugu horeysay ee Malachi, taas oo aniga ii qaboojisay marar badan ilaa waqtigaas. Waxaan weli u arkaa inay tahay farriin aad u muhiim ah oo ka ahaatay Kitaabka Quduuska ah. Farriinta ayaa ah in Eebbe badbaadin doono aadanaha oo dhan. Ilaah wuxuu diyaariyey hab ay dadka oo dhami ku gaadhaan badbaadada. Hadda wuxuu fulinayaa qorshihiisa. Aynu marka hore ka fiirsano jidka badbaadada wadajirka ah ee ereyga Ilaah. Bawlos waxa uu sharraxayaa xaaladda ay dadku iskood ugu helayaan "Waraaqda ay u qortay Roomaanka:
"Kulligood way dembaabeen oo way weynaadeen ammaanta ay lahaan jireen Ilaah hortiis" (Rooma 3,23 Schlachter 2000).
Ilaah wuxuu ugu talo galay ammaanta dadka. Tani waa waxa aan bini aadamka ugu yeedho farxad, dhammaystirka himilooyinkeenna oo dhan. Laakiin innaga oo ah bini'aadamka ayaa ku lumay ama lumay ammaantaan dembiga. Dembigu waa carqaladda weyn ee naga go'day sharaftii, iyo carqalad aannan ka adkaan karin. Laakiin Ilaah caqabaddaas ayuu ka saaray wiilkiisii ​​Ciise.
"Oo xaqdarro kuma sameeyo nimcadiisa xaggiisa, madaxfurashadii lagu sameeyey Ciise Masiix" (Aayadda 24).
Badbaadadu waa dariiqa Ilaah u qorsheeyay dadka si ay ugu suurtogeliso inay mar labaad ku helaan ammaanta Ilaah. Ilaah wuxuu leeyahay hal qaab oo keliya, hal waddo, laakiin dadku waxay isku dayaan inay bixiyaan dariiqyo iyo qaabab kale waxayna doortaan inay helaan badbaadada. Tani waa mid ka mid ah sababaha aan u naqaanno diimo badan. Ciise wuxuu naftiisa ka yidhi Yooxanaa 14,6: " Anigu waxaan ahay jidka ». Ma uusan dhihin inuu ka mid ahaa siyaabo badan, laakiin dariiqa. Haddaba Butros wuxuu taas ku caddeeyey Golaha Sare hortiisa:
"Iyo mid kale ma jiro badbaadada (Madax furasho), sidoo kale waa magac kale ma jiro waxaa la siiyey dadka samada ka hooseeya oo aannu ku badbaadi doonno in la badbaadiyo (Falimaha Rasuullada 4,12).
Bawlos wuxuu warqad u qoray kaniisadda Efesos:
«Adiguna waad ku dhintay xadgudubyadiinnii iyo dembiyadiinnii. Sidaas darteed, xusuusnow inaad ku dhasheen jaahiliin, oo laydinku yeedhay sidii kuwa buuryoqab ah, iyo inaad waagii hore Masiix la’aantiis ka ahaydeen, oo reer binu Israa'iil ka tagteen, oo aan shisheeyayaal ka ahayn axdigii ballanka; sidaa darteed waad lahayd rajo male oo waxaan sugay adduunka la'aantiis Ilaah » (Efesos 2,1: 11 iyo 12).
Waxaan raadineynaa dariiqooyin looga baxo iyo beddelka xaaladaha adag. Taasi waa sax. Laakiin markay tahay xagga dembiga, waxaan haysanaa hal ikhtiyaar oo keliya: badbaadada xagga Ciise. Ma jiro wado kale, ma jiro kale, ma jiro rajo kale, ma jiro fursad kale oo aan ahayn tan Eebbe ugu talogalay tan iyo bilowgii: Badbaadada Wiilkiisa Ciise Masiix .
Haddii aan si dhab ah maskaxda ugu hayno maanka, waxay kicineysaa su'aalo. Su'aalaha ay Masiixiyiin badani isweydiinayeen:
Ka waran ehelkeyga qaaliga ah ee dhintay ee aan badalin?
Ka waran malaayiin badan oo weligood maqal magaca Ciise noloshooda?
Ka waran caruur badan oo aan waxba galabsan oo dhintey iyagoo aan Ciise aqoon?
Dadkani miyay qasab ku tahay inay xanuunsadaan maxaa yeelay waligood ma maqlin magaca Ciise?
Jawaabo badan ayaa la siiyay su'aalahan. Qaar ayaa rumeysan in Eebbe kaliya doonayo inuu badbaadiyo kuwa yar, oo uu isagu doortay oo ugu talo galay ka hor intaan dunida la aasaasin. Kuwo kale waxay moodayaan in Ilaah ugu dambeyntii badbaadin doono qof walba, hadey jecel yihiin iyo haddii kaleba, in Ilaah uusan naxariis lahayn. Waxa jira hadhyo badan oo u dhexeeya labadan fikradood ee aanan ka hadli doonin hadda. Waxaan nafteena u hibeyneynaa weedhaha erayga Eebbe. Ilaah wuxuu doonayaa furasho dadka oo dhan. Tani waa rabitaankiisii ​​la muujiyey, kaas oo uu si cad u qoray.
Taasi waa wax wanaagsan oo Eebbe ka raalli ah. Badbaadiyeheenna oo raba taasi hiil Dadka waa la caawiyaa oo waxay gartaan aqoonta runta. Maxaa yeelay, waa Ilaah iyo dhexdhexaadiye u dhexeeya Ilaah iyo nin, oo ah ninka Ciise Masiix, oo naftiisa u bixiyey a dhammaan badbaadada » (1 Timoteyos 2,3: 6 -).
Ilaah wuxuu si cad u muujinayaa inuu doonayo inuu badbaado u abuuro qof walba. Ereygiisa wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday rabitaankiisa ah in qofna lumin doonin.
«Sayidku ma daahiyo ballanka sida qaar loo arko inay tahay; laakiin isagu wuu kuu dulqaataa adiga iyo ma doonayo in qof lumo , laakiin in qof kastaa heli karo basas » (1 Butros 3,9).
Sidee buu Ilaah haddaba doonistiisa u dhaqan gelin doonaa? Ilaah kuma adkayn doono mawqifkiisa ku meel gaarka ah ee eraygiisa, laakiin sida allabari wiilkiisa uu ugu adeego inuu badbaadiyo aadanaha oo dhan. Waxaan u heellan nahay dhinacan. Baabtiiskii Ciise, Yooxanaa Baabtiisaha ayaa tilmaamay xaqiiqo muhiim ah:
«Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das adduunka Dembigu wuxuu xambaarsan yahay » (Yooxanaa 1,29).
Ciise wuxuu qaatay dembiyadii dunida oo dhan, mana ahan qayb ka mid ah dembigaas. Wuxuu qaatay xumaan kasta, xumaan kasta, xumaan oo dhan, khiyaano iyo khiyaano oo dhan. Wuxuu qaatay culayskan culus ee dembiyada adduunka oo dhan wuxuuna u dhintay dadka oo dhan, waana ciqaabta dembiga.
"Oo waa dib-u-heshiisiinta dembiyadeenna, oo keliya ma ahan ee annaguba, laakiin sidoo kale iyaga aawadood adduunka oo dhan » (1 Yooxanaa 2,2).
Ficilkiisa weyn, Ciise wuxuu fure u furay badbaadadooda adduunka oo dhan, iyo dadka oo dhan. In kasta oo culayska culayska dembiga ee Ciise qaaday iyo in kasta oo murugada iyo silica uu lahaa inuu adkaysto, Ciise wuxuu ku qaatay wax walba jacayl qoto dheer innaga dhex jira, jacaylka dadka oo dhan. Qorniinka si fiican loo yaqaan ee noo sheegayaa:
«Markaa Ilaah ayaa leh dunida jecel wuxuu siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay in kuwa isaga rumaystaa oo aan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah (Yooxanaa 3,16).
Isagu wuu inoo sameeyey iyada oo ah «raaxo». Maaha in lagu dhexjiro dareemo murugo leh, laakiin laga helo jacaylka qoto dheer ee qof walba.
Sababta oo ah Way ka farxisay Ilaah in ku jira (Ciise) faro badan oo dhan waa inay ku noolaadaan, isaguna isaga wax walba waa la heshiisiiyay jannada ha ku ahaato ama jannada dhexdeeda, isagoo nabdoon oo iskutallaabta ku nabad samaynaya. (Kolosay 1,19, 20).
Ma garan karnaa kan Ciise yahay? Isagu waa "keliya" badbaadiyaha bini-aadamka oo dhan, isaguna waa abuurkiisa iyo daryeelaha. Isagu waa shakhsiyadda noogu yeedhay adduunka iyo inuu eraygiisa galo. Sidoo kale isagaa ah kan na ilaaliya, oo na siiya cunno iyo dhar, oo inaga dhiga nidaamyada oo dhan meel bannaan iyo dhulka si aan xitaa u sii jirno. Bawlos wuxuu tilmaamay xaqiiqadan:
Sababta oo ah wax walba isagaa ku abuuray isaga Waxa jannada ku jira iyo waxa dhulka joogaba, waxyaalaha la arki karo iyo waxa aan la arki karinba, inay yihiin carshiyo ama taliyayaal ama xoog ama awood. dhammaanteed isagaa abuuray oo u sii jeedaa isaga. Oo wax walba ka sarreeya, iyo waa wax walba oo ku jira » (Kolosay 1,16, 17).
Ciise Bixiyaha, Abuuraha iyo Bixiyaha wuxuu sameeyay bayaan gaar ah wax yar ka hor dhimashadiisa.
«Oo markii layga sarraysiiyo dhulka, waxaan doonayaa inaan oo dhan ii dhaqaaq. Laakiin wuxuu yiri si ay u muujiso waxa uu dhiman doono » (Yooxanaa 12,32).
Ciise wuxuu ula jeeday "kor u qaadida" iskutallaabtiisa, taas oo keentay dhimashadiisa. Wuxuu saadaaliyay inuu ku lug yeelan doono qof walba dilkan. Markuu Ciise yiri qof walba, wuxuu ka dhigan yahay qof walba, dadka oo dhan. Bawlos wuxuu qaatay fikirkaan:
«Sababtoo ah jacaylka Masiixu wuu inagu boorinayaa, gaar ahaan maadaama aan aaminsanahay haddii mid u dhinto dadka oo dhan, ka dibna dhammaantood way dhinteen» (2 Korintos 5,14).
Dhimashadii Masiixa ee iskutallaabta dusheeda, wuxuu qof kasta u keenay hal qadarin, maxaa yeelay isagu dhammaantood ayuu iskutallaabta isugu soo qaaday. Dhammaantood waxay ku dhinteen geerida badbaadiyahooda. Ogolaanshaha dhimashada halista ah waa sidaas oo ay dadka oo dhami u heli karaan. Sikastaba, Ciisena weli may dhiman, ee wuxuu ka soo barbaaray aabihiis. Sarakicidda kuwii dhintay, sidoo kale wuxuu ku lug yeeshay qof walba. Dadka oo dhan waa la soo sara kicin doonaa. Tani waa bayaan aasaasi ah oo ka yimid Kitaabka Quduuska ah.
Ha la yaabin. Waayo, saacaddu waa iman doontaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, oo waxaa soo bixi doona kuwa wanaagga u sameeyey sarakicidda nolosha, kuwa xumaanta u sameeyey sarakicidda xukunka, (Yooxanaa 5,28: 9).
Ciise ma uusan sheegin waqtiga loogu talagalay bayaankan. Ciise ma sheegin in labadan sarakicidda ay dhacayaan waqti isku mid ah ama waqtiyo kala duwan. Waxaan aqrin doonaa qaar ka mid ah aayadaha Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan xukunka. Halkan waxaa naloo tusay cidda garsooruhu noqon doono.
«Maxaa yeelay aabbuhu qofna ma xukumo, laakiin wuxuu leeyahay xukun oo dhan ku wareejiyay wiilka sidaasay dhammaantood u wada maamuusaan wiilka. Kii aan wiilka murweeyn, ma murweeyo Aabbihii soo diray. Oo wuxuu siiyey amar uu ku qabto maxkamadda maxaa yeelay waa wiilka Aadanaha » (Yooxanaa 5, aayadaha 22-23 iyo 27).
Garsooraha qofkasta mas'uul ka ah wuxuu noqon doonaa Ciise Masiix laftiisa, abuuraha, daryeelaha iyo furaha qof walba. Garsooruhu waa isla shaqsiyadii u dhintay dadka oo dhan, waana isla kii dib u heshiisiinta u keenaya dunida, isla qofkii nolosha siiya qof walba oo sii nooleeya. Ma dalban karnaa garsoore ka wanaagsan? Ilaah wiil buu xukumay maxaa yeelay, waa Wiilka Aadanaha. Wuxuu ogyahay waxa ay tahay in qofku noqdo. Isagu wuu ina yaqaan aadanaha aad ugu dhow, waa mid inaga mid ah. Isagu wuu garanayaa xoogga dembiga iyo sasabta shaydaanka iyo adduunkiisa. Wuxuu ogyahay dareenka aadanaha iyo inuu wado. Wuxuu ogyahay sida ay u shaqeeyaan, sababtoo ah wuxuu abuuray dadka oo wuxuu noqday bini aadam sideena oo kale ah, laakiin dembi la'aan.
Yaan dooneynin inuu aaminto xaakinkan? Yaan dooneyn inuu ka jawaabo ereyada garsooraha, hortiis ku sujuudo oo qirto dembigiisa?
Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay: Ku alla kii ereygayga maqla oo rumaysta kii i soo diray Wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xukunna uma iman, laakiin dhimashaduu uga soo gudbay xagga nolosha, (Aayadda 24).
Xukunka Ciise fuliyo wuxuu noqon doonaa mid dhammaystiran. Waxaa lagu gartaa dhexdhexaadnimo, jacayl, cafis, naxariis iyo naxariis.
In kasta oo Ilaah iyo Wiilkiisa Ciise Masiix ay u abuureen xaaladaha ugu wanaagsan ee qof kasta oo bini aadam ah si ay u helaan nolol weligeed ah, dadka qaarkiis ma aqbali doonaan badbaadadiisa. Ilaah kuma qasbi doono inay ku farxaan. Waxay goosan doonaan wixii ay beero. Markay xukunku dhammaado, waxaa jira laba kooxood oo dad ah, sida CS Lewis ugu dhejiyay mid ka mid ah buugaagtiisa:
Koox ayaa ilaahay ku dhahda: doonistaada ayaa la samayn doonaa.
Ilaah wuxuu ku odhanayaa kooxda kale: Adiga ayaa la samayn doonaa.
Markuu Ciise dhulka ku sugnaa, wuxuu ka hadlay cadaabta, dabka weligiis ah, ilmada iyo ilko xanaaqa. Wuxuu ka hadlay xukun dil iyo ciqaab weligeed ah. Tani waa digniin annaga noo gaar ah si aynaan si fudud ugu dhaqmin ballanqaadka badbaadada ee Ilaahay. Ereyga Eebbe, xukun-qabka iyo cadaabta wejiga lama gelinayo, jacaylka Ilaahay iyo u naxariisashada dadka oo dhami way taaganyihiin. Ilaah wuxuu doonayaa furasho dadka oo dhan. Qof kasta oo aan rabin inuu aqbalo jacaylka Ilaah iyo cafiska, wuxuu leeyahay doonista Ilaah. Qofna laguma ciqaabi doono ciqaabta weligeed ah haddii uusan isagu si cad u dooneyn isagu laftiisa. Ilaah ma cambaareynayo qof kasta oo aan fursad u helin inuu wax ka barto Ciise iyo hawshiisa badbaadadiisa.
Baybalka dhexdiisa waxaan ku aragnaa laba muuqaal oo maxkamadda adduunka ah oo la qoray. Waxaan ka helnaa Matayos 25 iyo kan kale Muujintii 20. Waxaan kugula talinayaa inaad akhrido. Waxay na tusayaan aragtida sida Ciise u xukumi doono. Maxkamadda waxaa lagu muujiyey inay tahay dhacdo la qabtay waqti cayiman. Waxaan rabnaa inaan u weecino kutub tilmaamaysa in maxkamaddu sidoo kale macnaheedu noqon karto waqti dheer.
«Maxaa yeelay waxaa la gaadhay waqtigii xukunka lagu bilaabi lahaa guriga Ilaah. Laakiin hadday noo timaaddo, maxay ku dhammaan doontaa kuwa aan rumaysan injiilka Ilaah » (1 Butros 4,17).
Guriga Ilaah waxaa loogu adeegsaday magac ahaan kaniisad ama beel. Iyadu maanta ayay maxkamad tahay. Masiixiyiintu waxay maqleen oo uga jawaabeen baaqii Ilaah ee maalmahooda. Waa inaad barataa Ciise inuu yahay Abuuraha, Badbaadiyaha iyo Bixiyaha. Maxakamadda ayaa hadda loo qabanayaa iyaga. Guriga Ilaah weligiis looma xukumo si ka duwan sidii hore. Ciise Masiix wuxuu adeegsadaa isla halbeegga loogu talagalay dadka oo dhan. Tan waxaa lagu gartaa jacayl iyo naxariis.
Gurigii Ilaah waxaa loo galiyay hawl Eebihiis inay ka caawiyaan badbaadinta aadanaha oo dhan. Waxaa naloogu yeedhay inaan injiilka ku wacdino Boqortooyada Ilaahay dadkeena aadanaha ah. Dadka oo dhami maa arkaan farriintan. Kuwo badan baa quudhsada, maxaa yeelay, iyadu waa nacas, oo aan dan u lahayn, ama wax aan caqli lahayn. Waa inaanan iloobin inay tahay shaqada Ilaahay badbaadinta dadka. Waxaan nahay shaqaalihiisa, oo badanaa qaladaad sameeya. Yaanu niyad jabinin haddii guusha shaqadeenu ay u muuqato in aan lagu guuleysan. Ilaah had iyo jeer wuu shaqeeyaa wuuna wacaa oo dadka ayuu la socdaa naftiisa. Ciise wuxuu arkaa in kuwa loo yeedhay ay gaari doonaan halka ay u socdaan.
Ma jiro qof ii imaan kara haddii uusan aabihii i soo diray uusan jiidin, oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa. Wax kasta oo aabbahay i siiyo way ii yimaadaan; oo ku alla kii ii yimaadaa, ma eryi doono. Maxaa yeelay, waxaan uga imid xagga jannada inaan sameeyo doonisteyda, laakiin doonista kuwa ii soo diray. Laakiin tanu waa doonistii kii i soo diray in aanan lumin wax kasta oo uu i siiyey, laakiinse inaan maalinta u dambaysa sara kiciyo. (Yooxanaa 6,44 iyo 37-39).
Aynu rajeyno gebi ahaanba Allah. Isagu waa Badbaadiyaha, Badbaadiyaha iyo Bixiyaha dadka oo dhan, gaar ahaan Mu'miniinta. (1 Timoteyos 4,10) Aynu ilaalino ballan qaadkan Ilaah!